Soo dejisan 2048 1.2 – Vessoft
Soo dejisan 2048
2048 – ciyaar xiiso leh oo macquulka ah ee ku sifayn ee xujo. Ujeedada ugu weyn ee ciyaaryahan uu yahay in ay u guuraan blocks la lambarada in dhinacyada kala duwan ee sabab u ah iyaga mideeya in tiro ka mid ah 2048. On garoonka lagu ciyaarayo waxaa jira blocks la lambarada aaday, kuwaas oo loo soo koobay in geeddi-socodka dhaqdhaqaaqa iyo abuuro Tirada cusub. Murugsan ee 2048 uu ka kooban yahay in ku biiro isku mar ah oo dhan blocks on garoonka lagu ciyaarayo oo awood ciyaaryahan inay si fudud u helaan in istaagay. Ciyaarta ayaa u saamaxaaya in ay astaysto xawaaraha animation ah, hanuuninta ee garoonka lagu ciyaarayo iyo tirada dhibcood si ay u dhamaystiraan ciyaarta. Sidoo kale ee 2048 soo bandhigay score ciyaarta ku dhameysatay kaalinta iyo record ugu badan ee dhibcaha la keenay.
Gameplay Farxad leh
Horumarinta ee fikirka caqli galka ah ciyaaryahan
Settings ka mid ah tirada dhibcood si ay u dhamaystiraan ciyaarta
Joogitaanka qaybta guulaha
2048 Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Pokemon GO 0.37.1
Downloaders Tool inay dalka baadhaan oo soo bixi faylasha internet-ka. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u fuliyaan ah search file haboon goobaha badan torrent caan ah.